Wararka Suuqa Maanta: Haaland oo ku biiri kara Real Madrid, Xiisaha Kalvin Phillips ee Red Devils, iyo Qodobo kale | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Haaland oo ku biiri kara Real Madrid, Xiisaha Kalvin...
Wararka Suuqa Maanta: Haaland oo ku biiri kara Real Madrid, Xiisaha Kalvin Phillips ee Red Devils, iyo Qodobo kale
Manchester United ayaa u weecatay saxiixa Leeds United Kalvin Phillips, oo 25 jir ah, ka dib markii ay ka tanaasushay xiisihii ay u qabtay inay ka soo qaadato West Ham United xiddiga qadka dhexe ee reer England Declan Rice, oo 22 jir ah . (dailystar)
West Ham ayaa qorsheyneysa inay Rice ku iibiso ku dhawaad ​​90 milyan oo ginni iyagoo diyaarinaya dalabkiisa bedelkiisa. (footballInsider)
Agaasimaha isboortiga Bayern Munich Hasan Salihamidzic ayaa meesha ka saaray wararka xanta ah ee ay kooxdu dooneyso inay kula soo saxiixato daafaca reer Germany ee Chelsea Antonio Rudiger oo 28 jir ah (DAZN)
Real Madrid ayaa ka fiirsaneysa inay dalab ka gudbiso daafaca dambeedka midig ee reer Spain Pedro Porro, oo 22 jir ah, kaasoo haatan amaah ugu jooga Sporting Lisbon oo uu ka soo qaatay Manchester City . (O Jogo)
Liverpool iyo Manchester United ayaa ka mid ah kooxaha Ingiriiska ee la sheegay inay la socon doonaan xaaladda qadka dhexe ee reer Ivory Coast Franck Kessie, oo 24 jir ah, kaasoo diiday heshiis kordhin uu u saxiixo AC Milan . (90min)
Chelsea ayaa badbaadin lahayd 48 milyan oo ginni xagaagii hore haddii Timo Werner uu ku biiro Manchester United , taasoo ah waxa uu doonayay 25 jirka reer Germany. (Express)
Tababaraha Everton Rafael Benitez ayaa doonaya inuu Goodison Park ka keeno Real Madrid Isco oo 29 jir ah iyo weeraryahanka Serbia Luka Jovic oo 23 jir ah bisha Janaayo. (Defensa Central)
Richarlison ayaa qirtay inuusan hubin waxa mustaqbalku yahay iyadoo la isla dhexmarayo in 24 jirka reer Brazil uu ka tagi doono Everton. (Liverpool Echo)
Crystal Palace ayaa isha ku heysa xiddiga Everton Tom Davies, oo 23 jir ah, iyadoo aan la hubin mustaqbalka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ingariiska. (footInsider)
Barcelona ayaa weli dooneysa inay la soo wareegto daafaca Juventus iyo Netherlands Matthijs de Ligt, oo 22 jir ah, waxayna u soo bandhigi doontaa goolhayaha Jarmalka Marc-Andre ter Stegen, 29 sano jir ah, iyo weeraryahanka Netherlands Memphis Depay, oo 27 jir ah, si uu qeyb uga noqdo heshiiska. (Calciomercato)
Barca ayaa sidoo kale xiiseyneysa inay la soo saxiixato 17-jir u dhashay dalka Sweden Williot Swedberg ee kooxda Hammarby oo ah . (Expressen)
Weeraryahanka kooxda Club Brugge Noa Lang ayaa u furan inuu u dhaqaaqo Arsenal laakiin Gunners ayaa tartan kala kulmeysa AC Milan saxiixa 22 jirkaan reer Holland. (Mirror)
Madaxa fulinta ee Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ayaa sheegay in Real Madrid ay tahay kooxda “sasabaneysa” Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah, iyadoo weeraryahanka reer Norway uu go’aaminayo halka uu mustaqbalkiisu yaallo. (AS)
Dortmund iyo Hoffenheim ayaa isha ku haya weeraryahanka West Bromwich Albion ee 17 jirka reer England Reyes Cleary. (Dailymail)
Jacob Ramsey, oo 19 jir ah oo u ciyaara kooxda Aston Villa , ayaa lagu soo waramayaa inuu u soo baxay bartilmaameedka Manchester City , iyadoo kooxda heysata horyaalka ay si gaar ah isha ugu heyso xiddiga reer England. (Fichajes)
Ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee Spain Juan Mata, oo 33 jir ah, ayaa ka fiirsanaya mustaqbalkiisa xilli ay ku yar tahay inuu ka ciyaaro Manchester United xilli ciyaareedkan. (Manchester Evening News)
Thierry Henry ayaa sheegay in milkiilaha cusub ee Daniel Ek uu sugayo jawaabta dalabkiisii ​​ahaa inuu iibsado Arsenal . (Sky Sports)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Roma Steven Nzonzi ayaa ku sii dhawaanaya inuu u wareego kooxda Qatari Al Rayyan , maadaama suuqa kala iibsiga maxalliga ah uu furan yahay ilaa 30ka Sebtember isla markaana xiddiga reer France oo 32 jir ah uu qandaraaskiisu dhacayo sannadka 2022. (Calciomercato).
Previous articleIlaalada Saciid Deni oo dilay Maryan Axmed Maxamed
Next articleKooxda PSG oo ku dhawaaqday Liiska Xidigaha ay kaga hortageyso Kooxda Manchester City